Xhumanisa Ijusi, Ukulandelana Kwesiza kanye Namaqiniso
Ukuthi Ubukhosi Bakho Bendawo Yakho Ubukeka Kanjani Ngempela
NgoLwesibili, ngoJuni 29, i-2010 Douglas Karr
Izinkampani eziningi kakhulu engisebenza nazo zigxila kakhulu esikhathini sazo ekhasini lazo lasekhaya, ukuzulazula, namakhasi alandelayo. Amaningi awo ajiyile, anezimakethe ezingadingekile namakhasi angafundwa muntu - kepha aqinisekisa ukuthi akhona lapho. Abaqambi nama-ejensi bahlala phansi bathuthukise isayithi benesikhundla esihle ngokwengqondo esivame ukubukeka kanjena:
Banethemba lokuthi 'i-juice yokuxhumanisa' igeleza kahle isuka ekhasini elibaluleke kakhulu esigabeni sabaphathi iye kokungabaluleki kangako. Akuyona indlela okuhlala kwenzeka ngayo, noma kunjalo.
Njengoba i-Google ithola isiza sakho futhi izixhumanisi zakho zitholwa yilelo phuzu kokuqukethwe kwakho, i-Google iqala ukuzakhela eyayo incazelo yobukhosi besiza sakho.
Ungaba nokuthunyelwe okukodwa okulungiselelwe kahle amagama angukhiye athile, futhi unethoni yezixhumanisi kukho, empeleni kushayela ukubaluleka kwamakhasi kusayithi lakho ngokubuyela emuva ngeGoogle. "Ijusi lokuxhumanisa" lingase ligeleze lisuka kokuthunyelwe kwebhulogi liye esigabeni, lisuka esigabeni liye ekhasini lasekhaya kunokuba liphikise.
Vele, empeleni, noma ngabe isigaba sabaphathi asinendaba kangako nendlela esetshenziswa isivakashi sakho sewebhu.
Ikhasi ngalinye elilodwa liyikhasi lasekhaya futhi kufanele nobabili nikhuthaze futhi nilungiselele ukuthi kuzoba yikhasi lokungena kusayithi lakho nokuthi ninendlela ephumelelayo yokubandakanya - kungaba ngefomu lokuxhumana noma ngokuthuthukisa ukubizelwa esenzweni kumakhasi okufika. .
Kunzima ukukuqonda lokho ngoba wena cabanga ukuthi udale isigaba sabaphathi esibalulekile futhi esigxila ekubhekeni lapho ungathanda ukuthi sibe khona, akusho ukuthi isayithi lakho litholakala kanjani futhi lisetshenziswa kanjani empeleni! Yakha ngokufanele!
Tags: idatha ye-b2bi-cokeUbuchwepheshevTigerUhlelo lomphakathi we-zoominfo